WARARKA SUUQA LIVE: Liverpool Oo Ku Kalsoon Inay Gacanta Kusoo Dhigidoonaan Ciyaaryahan Ay Ka Faa’ideeysan Weysey Kooxda PSG – Kooxda.com
Home 2017 January Ingiriiska, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARARKA SUUQA LIVE: Liverpool Oo Ku Kalsoon Inay Gacanta Kusoo Dhigidoonaan Ciyaaryahan Ay Ka Faa’ideeysan Weysey Kooxda PSG
WARARKA SUUQA LIVE: Liverpool Oo Ku Kalsoon Inay Gacanta Kusoo Dhigidoonaan Ciyaaryahan Ay Ka Faa’ideeysan Weysey Kooxda PSG
Kooxda Liverpool ayaa damacsan inay soo qaadato ciyaaryahankii horre ee kooxda Real Madrid Jese Rodriguez kaasi oo kamid ah xidigaha laga doonayo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
Xidigaan ayaa bandhig wanaagsan ka sameyey kooxda Real MAdrid bilowgiisa qaab ciyaareed ee kooxdaas balse waxaa uu hada noqday ciyaaryahan la waayay kadib markii kooxda Paris Saint Germany ay xidigaan fursad siinweeysey.
Jese Rodriguez ayaa lasoo baxay qaab ciyaareed soo jiidasho leh waxaana uu ahaaa ciyaaryahan gooldhaliye kaasi oo wax badan Real MAdrid caawiyey xitaa kulamo waa weeyn ee uu kamid yahay Champions League.
Hada wararka ay daabeceeyso The Sun waxaa ay sheegayaan in Liverpool ay qaab fudud ku helikaraan ciyaaryahankaan waa haddii kooxda West Ham United ay xooga iska saaraan.
Kooxda West Ham United ayaa dhankeeda ka baadi goobeysa da’yarkaan waxaana ay dooneysaa in xidigo ay ku bedesho sida Ayew iyo Carrol kuwaasi oo loo arkay in kooxdooda aan muhiim u ahayn.
Kooxda PSG ayaa bedelkiisa keensatay durba kadib markii ay lasoo wareegtay ciyaaryahanka lagu magacaabo Jualina Drexler.
Filed in: Ingiriiska, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino